दुई वर्षभित्र सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राखिने, कति पर्छ मुल्य ? « Sansar News
दुई वर्षभित्र सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राखिने, कति पर्छ मुल्य ?
७ बैशाख २०७८, मंगलवार १३:१६
७ बैशाख, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले अबको दुई वर्ष भित्रमा सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष लिएको छ । बिभाग दुई बर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने तयारीमा छ ।
हाल एक सिफ्टमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरिरहेको विभागले दैनिक तीन हजारसम्म प्लेट छाप्ने गरेकाे छ। अबभने तीन सिफ्टमा काम गरेर दैनिक नौ हजारसम्म नम्बर प्लेट छाप्ने तयारीका विभाग रहेकाे छ ।
निजी तथा अन्य सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गराउन विभागले योजना बनाएको छ। यसको सुरुवात स्वरुप अबबाट नयाँ दर्ता हुने सबैखाले सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छभने चल्तीमा रहेका सवारीसाधनहरूले समेत निर्धारित समय भित्र जडान गर्नुपर्ने छ ।
विभागले चल्तीमा ल्याउन लागेको इम्बोस्ड प्लेट तीन प्रकारको हुनेछ । जसमा सरकारी तथा संस्थाका सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, निजी सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र सार्वजनिक साधनमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षरले लेखिएको हुनेछ ।
इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी अक्षरको मात्र प्रयोग हुने छ । जहाँ प्लेटको बाँया छेउको माथिल्लो भागमा नेपालको झन्डा र त्यसैको मुनि देशको नामकोड हुनेछभने त्यसमुनि सुरक्षात्मक होलोग्राम राखिएको हुन्छ। प्लेटमाथि अंग्रेजी अक्षरमा प्रदेशको नाम हुनेछभने त्यसको मुनि सवारीको लट र मुनि चार अंकको गाडी नम्बर लेखिएको हुन्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारी धनीको गुनासो भनेको मूल्य नै हो । अहिले चल्तिमा रहेकाे नम्बर प्लेटकाे ५ सय देखि एक हजारसम्ममा तयार हुने गरेको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भने साधारण नम्बर प्लेटको तुलनामा बढि मुल्य लाग्ने छ । यस प्रकारको नम्बर प्लेटको मुल्य चार प्रकारको हुने छ ।
जसमा ठूलो सवारीका लागि ३ हजार ६ सय, मझौला सवारी तथा सानो (चार पांग्रे सवारी) का लागि ३ हजार २ सय, सानो (तीन पांग्रे सवारी) का लागि २ हजार ९ सय र सानो दुई पांग्रे सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) का लागि २ हजार ५ सय रूपैयाँ जडान खर्च लाग्ने छ ।
कुनै पनि सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएपछि त्यो सवारीको विवरण विभागको सिस्टममा अपलोड गरिनेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडित आइएफआरडीलेको मद्दतले सवारीको ट्राकिङ, राजस्व तिरेनतिरेको जस्ता विवरण संकलन र जानकारी सहजै लिन सकिने छ ।